တရုတ်နိုင်ငံက အဝေးထိန်းအာရုံခံစနစ်သုံး ဂြိုဟ်တုသစ်များလွှတ်တင် - Xinhua News Agency
ရှီးချန်း ၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ် ရှီးချန်းဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ အဝေးထိန်းအာရုံခံစနစ်သုံးဂြိုဟ်တုအုပ်စု တစ်ခုကို ဇူလိုင် ၁၉ ရက် ပေကျင်းစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ ၁၉ မိနစ်တွင် အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါဂြိုဟ်တုများကို ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းများအတွင်းသို့ Long March-2C သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Yaogan-30 အမျိုးအစားမှ ၁၀ ကြိမ်မြောက် အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည့် ယင်းဂြိုဟ်တုများသည် multi-satellite ဘက်စုံဂြိုဟ်တု ကွန်ရက်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်သံလိုက် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ဆက်စပ်သောနည်းပညာများအား စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို လေ့လာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ် ရှီးချန်းဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ အဝေးထိန်းအာရုံခံစနစ်သုံးဂြိုဟ်တုအုပ်စုကို ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် Long March-2C သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယာဉ်ပေါ်တွင် Tianqi ဂြိုဟ်တုအုပ်စု၏ ဂြိုဟ်တုတစ်ခု ဖြစ်သည့် Tianqi-15 သည် အင်တာနက်အကြောင်းအရာအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းများအား လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ Launch Vehicle Technology အကယ်ဒမီက ထုတ်လုပ်သည့် Long March-2C သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံသည် အလျား ၄၃ မီတာ ရှိပြီး အလေးချိန် ၂၄၂ တန် သယ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဒုံးပျံသည် အမြင့် ၅၀၀ ကီလိုမီတာတွင် ဆိုလာအချိန်ကိုက်ပတ်လမ်းသို့ ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ချိန် ၂ တန်အား ပို့လွှတ်နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ ဇူလိုင် ၁၉ ရက် လွှတ်တင်ခြင်းသည် Long March ဒုံးပျံစီးရီး၏ ၃၈၀ ကြိမ်မြောက် လွှတ်တင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး Yaogan-30 အမျိုးအစား၏ နောက်ဆုံးလွှတ်တင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Long March-2C သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစ၍ မြင့်မားသော တိကျမှန်ကန်မှု ၊ လွှတ်တင်ခြင်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ Yaogan-30 ဂြိုဟ်တုအုပ်စု ၁၀ ခုကို ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းများအတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
XICHANG, July 19 (Xinhua) — China successfully launchedanew remote-sensing satellite group from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China’s Sichuan Province at 8:19 a.m. Monday (Beijing Time).
Monday’s launch was the 380th mission of the Long March rocket series that also marked the conclusion of the launch of the Yaogan-30 family.
Photo 1.A Long March-2C carrier rocket carryinganew remote-sensing satellite group blasts off from the Xichang Satellite Launch Center in Xichang, southwest China’s Sichuan Province, July 19, 2021. China successfully launchedanew remote-sensing satellite group from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China’s Sichuan Province at 8:19 a.m. (0019 GMT) on Monday.
The satellites were sent into orbit byaLong March-2C carrier rocket. This is the 10th group belonging to the Yaogan-30 family.
Monday’s launch was the 380th mission of the Long March rocket series. (Photo by Guo Wenbin/Xinhua)
Photo 2.A Long March-2C carrier rocket carryinganew remote-sensing satellite group blasts off from the Xichang Satellite Launch Center in Xichang, southwest China’s Sichuan Province, July 19, 2021. China successfully launchedanew remote-sensing satellite group from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China’s Sichuan Province at 8:19 a.m. (0019 GMT) on Monday.
Monday’s launch was the 380th mission of the Long March rocket series. (Photo by Zhu Jihan/Xinhua)